Maneho ny fitiavany antsika Izy
"Izao no nanehoana ny fitiavan 'Andriamanitra antsika: Andriamanitra naniraka ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin'ny alalany" - 1 Jao. 4:9
Ny endrika isehoan'ny herin'ny mpahary dia fanehoany ny fitiavany tsy manam-petra. [...] Hoy ny mpanao Salamo: "Manan-tsandry mahery Hianao; mahery ny tananao, avo ny tananao ankavanana. Rariny sy fitsarana no fanorenan'ny seza fiandriananao; Famindrampo sy fahamarinana no mialoha ny tavanao. Sambatra izay olona mahalala ny feo mahafaly; Jehovah ô, amin'ny fahazavan'ny tavanao no handehanany. Ny anaranao no hifaliany mandrakariva; ary ny fahamarinanao no hisandratany. Fa voninahitry ny heriny Hianao; ary amin'ny fankasitrahanao no hisandratan' ny tandrokay. Fa an'i Jehovah ny ampinganay (...)" - Sal. 89:13-18
Ny tantaran'ilay fifanandrinana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy, hatramin'ny fotoana voalohany niandohan'izany ka hatramin'ny famongorana ny fikomiana sy ny fandringanana tanteraka ny fahotana, dia mbola fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra tsy miova koa (...) Ny laldn'ny fitiavana no fototry ny governemantan'Andriamanitra; noho izany, ny fahasambaran'ny voary manan-tsaina rehetra dia miankina amin'ny fanarahan' izy ireo ny foto-kevi-dehiben'ny fahamarinana. Fanompoana Azy amim-pitiavana no andrandrain'Andriamanitra avy amin'ireo voariny rehetra fanompoana izay mipololotra avy amin'ny fankasitrahana an'Andriamanitra noho ny toetrany. Tsy sitrany ny fankatoavana terena (...) Raha mbola niaina tao anatin'ny fanompoana tamim-pitiavana ny voary rehetra, dia firindrana tanteraka no nanjaka nanerana ny tontolo manontolo noforonin'Andriamanitra. Fifaliana ho an'ireo mponin'ny lanitra ny nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fahafinaretana ho azy ireo ny naneho ny voninahitr'Andriamanitra sy ny nanandratra fiderana Azy. Ary raha mbola ny fitiavan'Andriamanitra no nomen'izy ireo ny toerana ambony indrindra, dia nanjaka ny fifankatiavana tao anatin'ny fifampitokisana sy ny fahafoizan-tena. Tsy nisy na dia endri-pikorontanana kely aza nanembantsembana ny firindran'ny fiaraha-monin' ny lanitra. — PP, 33-35.